Lego Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina ပြန်လည်သုံးသပ်
16 / 09 / 2020 23 / 09 / 2020 ရော့ Paton 4888 Views စာ0မှတ်ချက် 75290 Mos Eisley Cantina, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars
75290 Mos Eisley Cantina တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Lego Star Wars ဇာတ်ကောင်, ကျက်သရေနှင့်ကစားခြင်းနှင့်အတူထုပ်ပိုး set ကိုတစ် ဦး recreates classic သစ္စာရှိရှိအသေးစိတ်အတွက်ရုပ်ရှင်တည်နေရာ။
ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး Lego Star Wars Mos Eisley ဆိုသော scum နှင့် villainy တို့၏ငြိုငြင်ဖွယ်ကောင်းသည့်အုံမှလာရောက်လည်ပတ်သည်။ သူသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော cantina သို့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဇာတ်ကောင်များနှင့်ဇာတ်ကောင်များအထိတ်တလန့်လေးခုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Mos Eisley cantina သည် Luke Skywalker နှင့် Obi-Wan Kenobi တို့သည် Han Solo နှင့် Chewbacca တို့နှင့်ပထမဆုံးဆုံတွေ့ရာနေရာဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထိုနေရာသည်လုကာသည်ပထမဆုံးမျက်တောင်ခတ်ပြီးအသုံးမပြုခင်အစောပိုင်းအဆုံး၌တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ Obi-Wan မှ lightaber တစ်ခုဖြစ်ပြီး Han နှင့် Greedo တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးထိုနေရာသည် classic C-3PO နှင့် R2-D2 သို့ညွှန်ကြားထားသော '' သူတို့ကဒီမှာသူတို့အစေကိုမခံပါဘူး '' ထိုအရာများအားလုံးကို Figrin D'an နှင့် Modal Nodes ၏ Jazz မှုတ်သွင်းထားသောတေးသီချင်း (ဂျွန်ဝီလျံမှဂိုးသွင်း) သို့တေးသွားများအားလုံးသည် Star Wars ချစ်သူ။
ဤကဲ့သို့သောငွေပမာဏကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းထားခြင်း၊ ထူးခြားသောနောက်ခံဇာတ်ကောင်များ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစွာပါဝင်သောကြောင့် Mos Eisley Cantina သည် Master Builder စီးရီးအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးသောသူဖြစ်သည်။ Lego Star Wars အစုံ
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - 75290 Mos Eisley Cantina ဖြန့်ချိ: စက်တင်ဘာ ၁၆ (VIP) / အောက်တိုဘာ ၁ ရက်
စျေးနှုန်း: £ 319.99 / $ 349.99 / € 349.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,187 အသေးစားပုံများ: ၂၁ (R21-D2 အပါအ ၀ င်)
ယခင်မာစတာဆောက်လုပ်သူစီးရီး၊ တိမ်တိုက်မှာ 75222 သစ္စာဖောက် Cityတစ် ဦး အညီအမျှကြီးမားခဲ့သည် Lego ဖန်တီးမှု, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္ofာန်၏ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်နှော။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ပြဇာတ်နှင့်ပြသမှုဖန်တီးမှု၊ ကြီးမားသည့်ပန်းကန်ကဲ့သို့တည်ဆောက်မှုသည်စျေးနှုန်းသည်နှစ်ဆဈေးသက်သာသည့် UCS ကဲ့သို့လက်တွေ့မကျကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falconအနည်းဆုံး Falcon ကိုတတိယနံပါတ်ဖြင့်၎င်း၏ဘက်တွင်ပြသနိုင်သကဲ့သို့ ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်arty ရပ်တယ်။
partနှင့်အတူ icular စိတ်ပျက် တိမ်တိုက်မှာ 75222 သစ္စာဖောက် City ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၏အယူအဆနှင့်သဘောပေါက်အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် 75290 Mos Eisley Cantinaဤကြီးမားသောတည်နေရာကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ဗဟိုအချက်အချာကျသည့်အနေဖြင့် - ပိတ်ထားသောအခါအနည်းငယ် ပို၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောခြေရာကိုယူပြီးကျယ်ပြန့်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်အားဖြင့်၎င်းအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာအထိကြီးမားသောအခွံကဲ့သို့သောပုံစံကိုသင်အတူတကွစုစည်းထားခဲ့သည်။ - စကေးစွဲငြိဖွယ်ရာ display နှင့်ကစား။
ကြည့်လို့ကောင်းတယ်art နှင့်မော်ဒယ်အီးပေးသောအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်xtra မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောပိုကြီးတဲ့ set ကိုဤမျှလောက်ကြီးသောလုပ်အားလုံးဒေသများအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမရှိဘဲအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်လက်တွေ့အဆင့်။
Master Builder စီးရီးများမှထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစားစုံသည်များပြားလှသောအပိုင်းအစများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဘတ်ဂျက်နှင့်အတူ Lego ဒီဇိုင်နာများသည်ပျော်ရွှင်စရာများစွာရှိသည်မှာမကြာသေးမီနှစ်များမှကြီးမားသောအရာများစွာကိုစံနမူနာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ရန်လိုသကဲ့သို့၊ 75290 Mos Eisley Cantina။ Star Wars ၌အသစ်သောမျှော်လင့်ချက်သို့မဟုတ်ယခုပြန်လည်လည်ပတ်ချိန်တွင်သတိထားမိရန်ဂရုစိုက်နိုင်သည့် cantina ၏ထူးခြားသောအသွင်အပြင်မှသင်မှတ်မိနိုင်သည့်အရာများအတွက်၊ ဤအစုအဝေးတွင်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်သောဒီဇိုင်းအချက်များရှိသည်။
st မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းartဤသည်မှာ Mos Eisley Cantina ကိုပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ Lego set, ဒါကြောင့်အကျွမ်းတဝင်ခံစားရဘူး 75290 ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအချိန်လေးရှိပါတယ်။ အရေးကြီးသည်မှာယခင်ကဖိနှိပ်ခံရသည့်အရာများဖြစ်သောဘား၊ ထိုင်ခုံနှင့်ဝင်ပေါက်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်မကျေနပ်မှု၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာနှင့်ယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများနှင့်မျှမျှတတနှိုင်းယှဉ်ရန်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ အမှန်မှာစကေးသည်ဤစက်၏အဓိကအရောင်းရဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်အတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောပမာဏမှသည်သင်မည်သည့်ပုန်းခိုစရာနေရာတွင်မဆိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ရှူရှိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အဓိကအရောင်တစ်မျိုးဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း Lego တစ်ခါတစ်ရံတွင်လှည့်စားတတ်ပြီး၎င်းသည်လည်းအမှန်ပင်ဖြစ်သည် 75290 Mos Eisley Cantina, အစုများအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်မျှအသေးစိတ်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ ၎င်းသည်အရောင်တစ်မျိုးတည်းနှင့်၎င်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအရအသေးစိတ်လုံလောက်စွာတောက်ပနေစေရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာများသည်နည်းစနစ်များစွာကိုအသုံးပြုကြသည် ideas ကြောင်းအောင်မြင်ရန်နှင့်အများဆုံး p အဘို့art သူတို့စောင့်ရှောက်မှုထိုက်တန်သကဲ့သို့မျှမျှတတမဟုတ်သော်လည်းသူကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာအသေးစိတ်မဖော်ပြသလို၊ တိမ်တိုက်မှာ 75222 သစ္စာဖောက် City, ဒါပေမယ့်, သင်ကအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် cantina ၏နံရံများဆောက်လုပ်ခြင်းသည်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုခြင်းထက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းကိုထည့်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ အတွင်းပိုင်းမုတ်များ၌ ဦး တည်။ ထောင့်အလှည့်အလှည့်အပြောင်း၌ရှိသည့်လိမ္မာပါးနပ်သောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။ မကြာခင်နောက်ခံသို့ရောစပ်အဖြစ်အတူတကွထည့်သွင်းပြီးနောက်သာအပြည့်အဝတန်ဖိုးထား။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ပုံစံကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနှင့်ပုံပြင်ကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်အဆောက်အ ဦး ကိုအလွန်အကျွံတည်ဆောက်ခြင်း (သို့) ဖြုန်းတီးနေသောအပိုင်းအစများနှင့်နေရာများတွင်မပါ ၀ င်ပါ။art စာအုပ်၊ ကာတွန်းနှင့်အယူအဆများအရ cantina တွင် Star Wars ပရိသတ်များမြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာများထက်ပင် ပို၍ ပင်ကျယ်ပြန့်သည်။ art.
ဤအတောအတွင်းအဆောက်အ ဦး များနှင့်ကားထဲတွင်နှစ်စီးပါ ၀ င်သောယာဉ်နှစ်စီးသည်အဓိကကျသောနေရာ၏အပြင်ပန်းအားအတွင်းပိုင်းကဲ့သို့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကစားနိုင်မှုကိုပေးသောကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုများဖြစ်သည်။ ဤသေးငယ်သောတည်ဆောက်မှုများသည်နောက်ဆုံး set-piece တစ်ခုသို့ထပ်ဆင့်ထပ်မံထည့်သွင်း။ ပိုမိုရိုးရှင်းသောအနည်းကိန်းပုံစံတစ်ခုအား Mos Eisley setting တွင်အပြည့်အဝနှစ်မြှုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ် Lego R2-D2 ကိုအသေးစားပုံစံအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ အုပ်စု ၇ ခုသည် Mos Eisley Cantina တွင်စုစုပေါင်း ၂၁ လုံးပါ ၀ င်သည်။ ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina တွင်ပါ ၀ င်သည်။ Lego Star Wars အစုံမဟုတ်ရင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အားဖြင့်တူးဖော်ခဲ့သောမူရင်း trilogy ပာအတွင်းအခြေခံပြီးတစ် ဦး တည်းကြကုန်အံ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် Lego လွန်ခဲ့သော 21 နှစ်အတွင်းအဖွဲ့။
ဤပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သရုပ်ပြသမှုများတွင် Obonda-Wan (နှင့်သူ၏ lightaber) ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုမီစိတ်ကူးယဉ်သော Luke Skywalker သည် cantina တွင်တွေ့ဆုံသည့် Ponda Baba နှင့် Dr Evazan တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်နဂါးငွေ့တန်း၏အလိုရှိသောအလိုအရှိဆုံးနှစ်ခုကိုကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသည် Star Wars ဇာတ်ကောင်များနှင့်တစ်ခုစီအတွက်ဒီဇိုင်းသည် Ponda Baba ၏ walrus နှင့်တူသော ဦး ခေါင်းကိုအသုံးပြုသောမှိုဒေါက်တာ Evazan ၏မျက်နှာအလှအဆင်းအထိစိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။
နောက်ဆုံး၌ Garindan အသေးစားတစ်ခုလည်းရှိသည်။ Imperial သူလျှိုသည် Sandtroopers အား Luke နှင့် Obi-Wan ကိုလိုက်လံရှာဖွေစဉ် Docking Bay 94 သို့ညွှန်ကြားသည်။ ဤဇာတ်ကောင်၏ထူးခြားသောပုံသဏ္headာန်ပုံသဏ္headာန်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်၊artမိမိအ minifigure ကနေထွက်ရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏ icular လမ်း။
လုကာနှင့် Obi-Wan လမ်းလျှောက်သောအခါ cantina ၏အလုပ်များသဘာ ၀ ဖြစ်သည် Star Wars ဇာတ်ကောင်တွေ Lego Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ထည့်သွင်းရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်အချို့ကိုရွေးချယ်ရန်အချို့ရွေးချယ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည် Star Wars အခြားသူများအပေါ်ပရိသတ်များ၊ ပွဲ ဦး ထွက်များဖြစ်သော Chadra-Fan မျိုးစိတ် Kabe၊ Ithorian Momaw Nadon၊ Saurin (Bossk မျိုးစိတ်) Hrchek Kal Fas နှင့်နတ်ဆိုးလို Devaronian အမည်ရှိသည့် Labria တို့သည်ထူးခြားကောင်းမွန်သောအရောင်များနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာပါဝင်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန်အုတ် -built မြင်ကွင်းတစ်ခု။
၎င်းသည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော Luke, Obi-Wan, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, Greedo, R2-D2, Sandtroopers, Modal Nodes band နှင့်bတို့ပါ ၀ င်သည့်အသေးအဖွဲပုံစံများဖြစ်သည်။artWuher ender ။ ပိုမိုကျယ်ပြန်နှင့်အတူသူတို့အားနေတုန်း Lego Star Wars စုဆောင်းမှုကိုဤသည်ကစိတ်ပျက်စေခြင်းငှါ, ထပ်ဇာတ်ကောင်ရဲ့ပါဝင်တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ပြဇာတ်နှင့်ပြသခြင်း၏တန်ဖိုးအတွင်းကိုပြောပြရန်ခွင့်ပြုဇာတ်လမ်းပြီးပြည့်စုံသောအဘို့အရေးကြီးပါသည် 75290 Mos Eisley Cantina။ နောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သောဇာတ်ကောင်များသည်အသစ်များနှင့်လိုအပ်သောသူများအကြားရောနှောမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစုဆောင်းသူများလက်ခံရန်အပေးအယူတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဤအစုကိုပေးသည်။ 37th သင်၏စုဆောင်းမှုထဲသို့ထည့်ရန် Luke Skywalker တွင်မပါ ၀ င်ပါ 75290 Mos Eisley Cantinaမင်းလည်းစိတ်ပျက်မိမှာပါ။
အက္ခရာရွေးချယ်ခြင်းသည်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဒီဇိုင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အခြားတစ်ခုနှင့်စျေးနှုန်းအတွက်ဖြစ်သည် 75290 Mos Eisley Cantina မှာပိုပြီးကြွလာမှာလာပါတယ်။ သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ Han Solo ၏ဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်း တိမ်တိုက်မှာ 75222 သစ္စာဖောက် Cityဥပမာအားဖြင့်၊ ဤအစုတွင် Greedo မည်သို့အသေးစိတ်ကြည့်ရှုမည်၊ ပို၍ ဆိုးရွားသည့်ပေါက်ကွဲထွက်နေသော droids သို့မဟုတ် truer-ဒီဇိုင်းရှိသော Obi-Wan နှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ Obi-Wan နှင့်အတူ၎င်းသည်မီးခိုးရောင်ဆံပင်အပိုင်းအစမပါရှိခြင်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။ အဆိုပါပါးပျဉ်းအတော်လေးအသစ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အပိုင်းအစဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ Obi-Wan က cantina ထဲကို ၀ င်လိုက်တာနဲ့ဆွဲချလိုက်တယ်။
သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့် ၂၁ မီနီဖစ်ဂရမ်ပါ ၀ င်သောအစီအစဉ်တွင်တန်ဖိုးထားစရာများစွာရှိသည် 75290 Mos Eisley Cantina လုပ်ထားပြီးဖြစ်သောဒီဇိုင်းအတွက်အသေးအဖွဲအပေးအယူအချို့ကိုလက်ခံရန်သေချာသည်။
မည်သည့် Lego ပေါင် ၂၀၀ ထက်ကျော်လွန်သောဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်သည်အရာရာကိုအဆင့်အသစ်များသို့ယူဆောင်သွားပြီးပေါင် ၃၁၉.၉၉ ဖြင့်ဖြစ်သည်။ 75290 Mos Eisley Cantina ကောင်းစွာနှင့်အမှန်တကယ်ကြောင်းပိုင်နက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုကဲ့သို့သော stratospheric အဆင့်များမှထုတ်လွှတ်မှုများသည်မတတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းပမာဏကိုသုံးစွဲခြင်းအတွက်တရားမျှတစေသည်။ ဒါပေမယ့်ကြောင့်, ထိုအတူလက်၌လက် Lego ထိုအချက်ကို Group မှနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်ထိုကဲ့သို့သောအစုံသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမည်မျှပေးကြောင်းဖြစ်သည် Lego ပန်ကာကနေဒီဝါသနာအတော်ပင်။
75290 Mos Eisley Cantina နာရီနှင့်ချီ။ နှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားသည် Star Wars: မျှော်လင့်ချက်အသစ်၊ Star Wars minifigure ရှိအက္ခရာများသည်အသစ်နှင့်လိုအပ်သောပုံစံများနှင့်အသေးစိတ်အတွက်ပြသရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များနှင့်ကစားရန်အတွက် ၀ င်ရောက်ရန်အချက်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုရန်အတွက်အသေးစိတ်ဖြစ်သည်။ 75978 Diagon Alley နဲ့အတူပြောခဲ့သလိုပဲ, 75290 Mos Eisley Cantina ဘတ်ဂျက်နှင့်ပတ်သက်လျှင်အခြားအဆင့်တွင်အမှန်ပင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရန်လုံလောက်သောကံကောင်းသူများအတွက်မူသူလုပ်ဆောင်သမျှအရာအားလုံးအတွက်နောင်တမရပါ။
ဒါကဖြစ်ပါသည် Lego အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဇာတ်ကောင်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ပေးသော set သည်၎င်းသည် playable နှင့် display ကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာရောနှောခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သင့်သည်များကိုသစ္စာရှိစွာပြန်လည်ဖန်တီးရုံသာမက p ကိုကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းယူနိုင်သည့်နည်းဖြစ်သည်။art Mos Eisley Cantina သည်အတွင်းပိုင်းရှိအထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ထိုအနှစ်သာရအားဖြင့်ဖြစ်သည် Star Wars နဂါးငွေ့တန်း။ ဤသည်ရုပ်ရှင်အပေါ်မိတ်ဆက်သောတည်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် classic ဇာတ်ကောင်တွေ၊ ပconflictိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ ဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဇာတ်လမ်းကိုအဆင့်မြင့်တင်ခဲ့တယ် 75290 Mos Eisley Cantina.
cantina သည်ကျယ်ပြန့်သော microcosm တစ်ခုဖြစ်သည် Star Wars ဂျော့ခ်ျလူးကပ်စ်ဖန်တီးထားသောနဂါးငွေ့တန်းသည်ထူးဆန်းသောသတ္တဝါအမျိုးမျိုးနှင့်အတူသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များပါ ၀ င်သည်၊ လေထု၏နောက်ခံအခြေအနေနှင့်လူနေမှုပုံစံ၊ ပရိသတ်တွေဆွဲဆောင်တဲ့အရာတွေအများကြီး Star Wars အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့ကို cantina နဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ်ရှိနေရာဒေသ၏ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ဆွဲဆောင်သည်။ သောဒီဇိုင်း၏သစ္စာရှိမှုနှင့်သဘောပေါက်ဘို့ Lego Group ကဒီမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ 75290 Mos Eisley Cantina - ဒါကသင့်ကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင်ဟာထပ်တူထပ်မျှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သင့်ကိုထင်စေခဲ့တယ်။ ထိုနောက်မှရက်အနည်းငယ်အကြာသင်တို့၏တေးဂီတကိုသင့်ခေါင်းပေါ်တွင်ကပ်ထားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်မှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ သင်၏သုံးစွဲမှု၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါသည် LEGO.com, နှင့်အားလုံးအရာအားလုံးကိုသင်တို့အားငါတို့ကိုအကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်သေချာစေသည် Lego.
← LEGO Dimensions ကို Jukebox အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Batman နှင့် ... →